03/03/2018 - Page 4 sur 5 -
Fananganana orinasa fiarovana : Naato ny fanomezan-dalàna
Hatramin’ny androany, mbola tsy misy lalàna mifehy ireo orinasa fiarovana na “société de securité”, nefa mbola miteraka resa-be ny momba ny fitazonana fitaovam-piadiana, toa ny hazo, matraque, sns. Satria mety hisy ny fifandonana, ady mandritra …Tohiny
«Petsa sy lena!»
Mpitsara iray no nosamborina ary nalefa any Ambatolampy noho ny raharaha Houcine Arfa. Voalaza ho nifandray an-tariby tamin’ireo mpiandry fonja nandritra ny fotoana nitsoahan’ity teratany vahiny ity ilay Mpitsara araka ny vaovao nampitain’ny manampahefana. Inona …Tohiny
Fiforonan’ny rivodoza : Tsy misy filazana loza ho an’i Madagasikara
Raha ny vaovao farany momba ilay tangoron-drahona arahi-maso dia an-dalam-pivadiana ho rivodoza izy ao Avaratra Atsinanan’ny Nosy amin’izao fotoana izao, raha ny tatitry ny sampana mpamantatra ny toetr’andro, omaly tokony ho tamin’ny 11 ora. Fantatra …Tohiny
Ho fampaherezana ny vehivavy malagasy rehetra dia nisy ny fotoam-pivavahana, notontosaina teny amin’ny Chapel Militaire Ampahibe, omaly, niarahan’ny vadin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Voahangy tamin’ireo vadin’ny mpitandro filaminana rehetra, izay tafiditra sahady ao anatin’ny fankalazana ny andron’ny …Tohiny
Mitohy hatrany ny fanohanan’ireo firenena vahiny an’i Madagasikara. Porofon’izany, masoivoho vahiny efatra be izao no indray nanatitra ny taratasy manendry azy ireo tamin’ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, omaly, teny amin’ny Lapa-panjakana Iavoloha. Araka izany, firenena efatra ...Tohiny